Aspire: Platform Suuqgeynta Saamaynta ee Kobaca Sare ee Shopify Brands | Martech Zone
Hadii aad tahay akhriste aad u jecel Martech Zone, waad ogtahay in aan dareemo isku dhafan suuqgeynta suuqgeynta. Aragtidayda suuqgeyntu ma aha in aanay shaqayn… waa in ay u baahan tahay in la hirgeliyo oo si wanaagsan loola socdo. Waxaa jira dhowr sababood oo sababta:
Dhaqanka Iibka - Saamaynayaashu waxa laga yaabaa inay dhisaan wacyiga sumadda, laakiin maaha inay ku qanciyaan booqdaha inuu dhab ahaantii wax iibsado. Taasi waa xaalad adag… halkaasoo laga yaabo in qofka wax saameeya aan si sax ah loo magdhabin ama iibka alaabtu aanu ahayn halka shirkadu doonayso inay wax badan ku maalgeliso.
Hawl-wadeenada -Anigoo la soo shaqeeyay summadaha hore, waxaan ogahay inay qaadatay bilo mararka qaarkood inaan bulshadayda ku diiriyo xal. Marka shirkaduhu aysan arkin natiijooyin degdeg ah, badanaa way shaqeeyaan. Waxaan natiijooyin fiican ka helay magacyo ila shaqaynayay sanad ama ka badan… laakiin kuwa raba inay sameeyaan 1 oo imtixaan la sameeyay weligood ma shaqeeyaan.
Socodka - Socdaal kasta oo macaamiil ah, waxaa jira meelo kala duwan oo dhamaadka ah… Waxa laga yaabaa in aan summada ku xuso bandhigga ama podcast-ka dhagaystayaashayduna ma isticmaali doonaan URL-ka caadiga ah, koodka dhimista, mana geli doonaan halka ay ka maqleen astaanta. Shirkadda, waxay u muuqataa inaanan qaban. Oo, waa iga niyad-jab in aanan helin sumcad.
Ecommerce waa warshado cajiib ah oo lagu shaqeeyo sababtoo ah safarka alaabada khadka tooska ah ayaa caadi ahaan ah maro nadiif ah oo qurux badan. Tani waa run marka la eego suuqgeynta saameeyayaasha ecommerce sidoo kale. Waa sababta ay u jiraan YouTubers samaynta malaayiin doollar sannadkii fursadaha suuq-gaynta saamaynta… waxay hoos u dhigaan xiriirka sharaxaadda bandhigga kumanaan taageerayaashooda ah ayaa laga yaabaa inay alaabta ku daraan gaarigooda. Dhagsi kasta iyo beddelaad kasta oo la raadin karo, summada iyo saameeyayayaashuba aad bay ugu faraxsan yihiin inay midba midka kale ka shaqeeyo sidii loo kicin lahaa wacyigelin iyo iibin dheeraad ah.
Faafida ayaa nolosheenna inteeda badan u rartay khadka, laga bilaabo sida aan isula xiriirno iyo habka aan wax uga iibsanno. Dhab ahaantii, IBM waxay dhawaan sheegtay in masiibadani ay dardargelisay u wareegida ganacsiga e-commerce qiyaas ahaan 5 sano.
Tusmada tafaariiqda Mareykanka ee IBM
Maanta, bulshooyinka dhijitaalka ah waxay xukumaan adduunka ganacsiga iyo calaamaduhu waxay bilaabayaan inay ogaadaan qiimaha korodhka ah ee maalgashiga saameeyayaasha - dadka caanka ah ee warbaahinta bulshada kuwaas oo kasbaday kalsoonida dhagaystayaashooda iyo awoodda ay ku rogaan fikradahooda iyo iibsashada go'aamada.
Maxaa loo suuq galiyaa Saameynta Naafada?
Waxaa jira faa'iidooyin la taaban karo oo ku aaddan la shaqeynta saameeyayaasha iyo dhisidda safiirrada summada:
Taageerada dhabta ah - Marka safiirku si dhab ah u jeclaado summada, waxay soo dhejin doonaan summadaas dhowr jeer - mararka qaarkood iyada oo aan la #boogayn - oo bixiya caddayn bulsho.
Dhageystayaal kala duwan – Safiir kastaa wuxuu saamayn ku leeyahay bulshadiisa. Waxay matalaan mid kasta oo ka mid ah macaamiisha bartilmaameedka ah waxayna uga hadlaan sumadda si la mid ah.
Soo saarista Macluumaadka - Sababtoo ah saameynayaashu waxay horumariyaan nuxurkooda, waxaad cabbiri kartaa horumarinta macluumaadkaaga kanaalkaaga inta aad rabto...dabcan diirada saara saameeyayaasha sida ugu fiican u matala astaantaada.
Maamulka Event - Saamaynayaashu waxay durbaba si weyn u maalgaliyaan dhacdooyinka tooska ah iyo baahinta, iyagoo siinaya fursado gaar ah oo qarsoodi ah si ay ugu soo bandhigaan summadaada dhagaystayaashooda.
Qiime-hoos u-helid kasta - Safiirada calaamaduhu waxay awood u siiyaan summadaha inay wax badan ku helaan wax ka yar, maadaama summaduhu ay ku xidhi karaan sicirka safiirada safka hore si ay ugu beddelaan iskaashiga muddada dheer.
Ka-saarista - Safiirada calaamaduhu waxay inta badan ku heshiiyaan inay gaar u noqdaan summada warshadahaas ka mid ah, taasoo u oggolaanaysa summada inay keli ku noqdaan booska xayeysiiska ee quudkooda.
Aspire: Suuqgeynta Saamaynaha waxay la kulmeysaa Ecommerce
Aspire waa madal suuqgeyn saameyn leh oo loo dhisay ganacsiga ecommerce. Madalku wuxuu bixiyaa:
Saamaynta Saamayn - Awooda lagu raadiyo oo lagu xidho in ka badan 6 milyan oo saameeyayaasha, taageerayaasha astaanta, khubarada warshadaha, iyo in ka badan adigoo gujinaya badhanka.
Maamulka Xiriirka - si hufan u maareeyaan ololayaasha saamaynta leh, barnaamijyada ku xidhan, abuurka alaabta, iyo in ka badan - oo aan xaddidnayn.
Toos u Rarista & Dabagalka - maraakiibta saameeya badeecadaha ay rabaan oo xitaa wadaagaan macluumaadka raadraaca - ka saara dhammaan hababka gacanta ee gacmahaaga.
dallacaadaha - Bulk waxay u abuurtaa koodh xayeysiis oo gaar ah oo Shopify ah iyo xiriiriyeyaal xiriiriye kasta ah, adigoon waligiis ka bixin goobta.
ROI la cabbiri karo - ku cabbir soo celinta barnaamijka saameynahaaga adigoo isticmaalaya dhagsi, isticmaalka koodka xayeysiinta, ama xitaa gaarista. U sheeg sheekada madadaalada buuxda ee sida saameeyayaashu u wadaan korriinka muddada-gaaban iyo kuwa dheer.
content abuurkii - Keen taabasho bini'aadminimo kanaaladaada suuq-geynta oo leh waxyaabo saameyn leh oo degdeg ah in la soo saaro, aan qaali ahayn, oo kala duwan. Kadibna xooji xayeysiisyada si aad u dhisto xitaa buuq badan.
Dukaan Isdhexgal - Ka faa'iidayso is dhexgalka Aspire's Shopify waayo-aragnimo gaar ah waxaad ku kici kartaa oo ku socon kartaa daqiiqado gudahood, oo ay ku jirto awoodda aad u dirto oo aad ula socoto alaabada ama dalacsiinta.
Buug Aspire Demo
Tags: danjirayaasha caanka ahkharashka iibsigasuuqgeynta suuqgeyntamadal suuq geyn saamayn lehxeeladaha suuq geynta saamayntaraad-raaca suuq-geyneed ee saameeyaMaareynta xiriirka saameyntaraadraaca saamayntakoodhyada xayeysiintadukaankaka dukaameysi is dhexgalka